Flower landscape | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Flower landscape
Geicher sy voninkazo
Mba hanomezana ny fototra iantsoana ny voninkazo indraindray dia mampiasa zavamaniry misy ravin-taratasy matevina sy loko maro - izany dia geykher, izay mifandray amin'izany dia niely be tamin'ny famolavolana tetikasa. Ny zavamaniry dia tonga avy any Amerika Avaratra ary, noho ny ezaka nataon'ireo mpamboly, dia nahazo loko mamirapiratra mamirapiratra kokoa sy ny fametrahana fandriam-pahombiazana ao anaty voninkazo.
Ny iray amin'ireo zavamaniry afaka manamboatra ny fandriananao dia heliotrope. Ny toerany dia mibontsina mamiratra tsy misy fery miaraka amin'ny fofona vanila. Ny singa manokana amin'ny heliotoope dia ny fahafahana mamadika ny lohan'ny voninkazo ao ambadiky ny fihetsikan'ny masoandro. Noho izany, ny anaran'ilay zavamaniry, izay midika hoe "mamadika ny masoandro" amin'ny teny grika.
Karazana fambolena voninkazo: famolavolana sy fiahiana amin'ny sehatra misokatra
Ireo olona tsy tia ny rameva, sarotra ny mahita. Io voninkazo mahafatifaty io dia heverina ho mariky ny fitiavana. Ny ankizivavy dia tena manaiky izany: ny tsirairay amin'izy ireo dia samy nilalao ny lalao "tia-tsy tiana", ny ranomamy. Raha te hampitombo io fahagagana io ianao ao amin'ny zaridainanao, dia ho azonao tsara aloha ny hahalalanao fa ny rameva zaridaina dia antsoina hoe garderie, ary avy eo dia hiresaka momba ny fambolena sy ny fikarakarana azy eny an-kalamanjana.
Raha tsy misy fototra ny orkide: maninona no mitranga izany, ary ahoana no tokony hipoitra?
Tavoahangy mamy sy mamy "Catalonia"
Ny endriky ny votoatiny sy ny toetran'ny karazana tantelin'i Karnika
Kavina japoney: toetra mahasoa sy fanoherana
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Flower landscape